सासू-ससुरासितको सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाइराख्ने? | सुखी परिवार
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अज्ये अटेसो अफ्रिकान्स अबुइ अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (ट्युनिसिया) अलुर अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा अहन्टा आइरिस आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इन्डोनिसियन साङ्केतिक भाषा इबान इबानाग इबिन्डा इलोको इसोको ईवी उइघुर (सिरिलिक) उङ्गाबेरे उज्बेक उड्मुर्त उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उर्दू उर्होबो एङ्गोलन साङ्केतिक भाषा एडो एफिक एम्बेरा (साटिओ) एसान एस्टोनियन ओटेटेला ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबाइली किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किनान्डे किन्यारवान्डा किपेन्डे किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी किसीई कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (टिना) कुइचुआ (पास्टाजा) कुइचुआ (सान्टिआगो डेल एस्टेरो) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यानगोन्डे क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा खाना गा गाउरानी गाउरानी (बोलिभिया) गारीफुना गालिसियन गिटोंगा गुजराती गुना गुर्जे गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक ग्वाटेमाला साङ्केतिक भाषा घानायन साँकेतिक भाषा चङ्गाना (जिम्बावे) चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चिनियाँ साङ्केतिक भाषा चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चुभास चुवाबो चेक चेक साङ्केतिक भाषा चोपी चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जाराकू जिम्बावे साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टान्ड्रयो टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टुभिनियन टेटन डिली टोंगन टोराजा डच डाँग्मे डायाक ङाजु डिगोर डुआला डुसुन डेनिश ड्रेहु तरहुमरा (मध्य) ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई दामारा नजेमा नर्वेली नाभाहो नाम्ब्या नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेङ्गोने नेपाली नोंगा न्दौ न्यु जील्याण्ड साङ्केतिक भाषा न्युङ्वे पंगासिनन् पंजाबी पंजाबी (शाहमुखी) पानामानियन साङ्केतिक भाषा पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पिजिन (क्यामरून) पुलर पेज पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेल्ले पोर्चुगिज पोर्चुगिज साङ्केतिक भाषा पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा फ्राफ्रा बंगाली बम्बारा बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाटाक (सिमालुङ्गुन) बालिनिज बाश्कीर बासा (क्यामरून) बासा (लाइबेरिया) बास्क बिकोल बियाक बिसाउ गिनियन क्रिओल बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो बोलिभियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मझाहुआ मडागास्कर साङ्केतिक भाषा मबुकुशु मराठी मरुसियन क्रिओल मलावी साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम माकुवा मानिन्काकन (पूर्वेली) मान्ड्जाक मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिक्सटेक (ह्वाजुआपान) मिङ्रेलियन मिजो मिहे मूर मेन्डे मेरू मोटु म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रियुनियन क्रिओल रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (उत्तरी ग्रिस) रोमानी (दक्षिणी ग्रिस) रोमानी (पूर्वी स्लोभाकिया) रोमानी (बुल्गेरिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) रोमानी (म्यासेडोनिया) सिरिलिक लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुन्डा लेन्जे लो जर्मन लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वास्टेक (सान लुइस पोटोसी) विची वेल्श वोलाइटा शिलुबा शुअर शोना श्वा सङ्गीर सरमक्कन सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सार्नामी सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिनाम्वांगा सिबेम्बा सिलोजी सुन्डा सुसु सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोमाली सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभाक साङ्केतिक भाषा स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस स्विडिस साङ्केतिक भाषा हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
“दया, विनम्रता, कोमलता र धीरज धारण गर।”—कलस्सी ३:१२
विवाहपछि एउटा छुट्टै नयाँ परिवारको सुरुवात हुन्छ। तपाईं आमाबुबालाई धेरै माया अनि आदर गर्नुहुन्छ। तर अबदेखि भने तपाईंको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति श्रीमान्‌ अथवा श्रीमती हो। यो कुरा स्वीकार्न आमाबुबालाई गाह्रो हुन सक्छ। तपाईं आफ्नो आमाबुबा र सासू-ससुरासितको सम्बन्धलाई राम्रो बनाइराख्न चाहनुहुन्छ। यसो गर्न तपाईंलाई बाइबलमा दिइएका सल्लाहहरूले मदत गर्नेछ। यस अध्यायमा दिइएका सल्लाहहरू सासू-ससुराको सन्दर्भमा मात्र होइन, तपाईंको दाजुभाइ, दिदीबहिनी, सासू-ससुराको नजिकको आफन्त, काका-काकी, मामा-माइजू, हजुरबुबा, हजुरआमा अनि परिवारका अरू सदस्यहरूसित व्यवहार गर्दा पनि लागू हुन्छ।
१ सासू-ससुराको आदर गर्नुहोस्
बाइबल के भन्छ? “तिमीले आफ्नो बुबा र आमाको आदर गर्नू।” (एफिसी ६:२) तपाईं जतिसुकै ठूलो भए तापनि तपाईंले आमाबुबाको आदर गर्नुपर्छ। त्यसैगरि तपाईंको जीवनसाथी पनि कसैको छोरा वा छोरी हो। त्यसैले तिनले पनि आफ्नो आमाबुबाको आदर गर्नुपर्छ। बाइबल यसो भन्छ, “प्रेमले डाह गर्दैन।” त्यसैले तपाईंको जीवनसाथी तिनको आमाबुबासित घनिष्ठ हुँदैमा तपाईंहरूबीचको दूरी बढ्ने हो कि भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्।—१ कोरिन्थी १३:४; गलाती ५:२६.
यस्तो खालको कुरा नगर्नुहोस्, “तपाईंको ममी/ड्याडीले मलाई सधैं हेपेर कुरा गर्नुहुन्छ” अथवा “तपाईंको ममीलाई त मैले गरेको केही चित्तै बुझ्दैन।”
जीवनसाथीको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्।
२ खुलस्त कुराकानी गर्नुहोस्
बाइबल के भन्छ? ‘मानिसले आफ्ना आमा-बाबुलाई छोड्छ र आफ्नी स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै जीउ हुन्छन्‌।’ (उत्पत्ति २:२४) छोराछोरीलाई हुर्काउने-बढाउने दायित्व आमाबाबुको हो। त्यसैले विवाह भइसकेपछि पनि उहाँहरूलाई तपाईंको चिन्ता लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईंले मदत नमागे तापनि उहाँहरूले तपाईंको लागि निर्णय गरिदिने अनि सरसल्लाह दिने गर्न सक्छन्‌।
आमाबुबाले कस्तो मामिलामा हस्तक्षेप गरेको चाहनुहुन्न, श्रीमान्‌-श्रीमती आपसमा कुरा गर्नुहोस् अनि उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा खुलस्त बताउनुहोस्। यसरी कुरा गर्दा रूखो नहुनुहोस्। (हितोपदेश १५:१) विनम्र, कोमल अनि धीरजी हुनुभयो भने ‘प्रेम देखाउँदै एक-अर्कालाई सहिरहन’ र सासू-ससुरासितको सम्बन्ध न्यानो बनाइराख्न सक्नुहुन्छ।—एफिसी ४:२.
तपाईंले आमाबुबा वा सासू-ससुरासित मदत माग्नुभएको छैन। तैपनि उहाँहरू ‘यसो गर, उसो गर’ भन्नुहुन्छ भने त्यस विषयमा जीवनसाथीसित उपयुक्त समयमा कुरा गर्नुहोस्।
यस्तो समस्या समाधान गर्ने उपाय निकालेपछि दुवै जनाले त्यसैअनुसार गर्नुहोस्।
आमाबाबुको भावना बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ। केही सरसल्लाह दिंदा त्यसले तपाईंहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा कुनै हानि गर्दैन भन्ने उहाँहरूलाई लाग्न सक्छ। उहाँहरू तपाईंहरूको धेरै ख्याल राख्नुहुन्छ। आमाबुबालाई तपाईंहरू अझै आलोकाँचो हुनुहुन्छ अनि पारिवारिक समस्या आफै सुल्झाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्न सक्छ। तपाईंको विवाहपछि उहाँहरूलाई तपाईंहरूले केही वास्ता नगरेको र कुनै सम्बन्ध राख्न नचाहेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर तपाईंहरूले बाइबलको सल्लाह लागू गर्नुभयो र आमाबुबासित खुलस्त कुराकानी गर्नुभयो भने उहाँहरूको अनादर हुनेछैन र तपाईंहरूको वैवाहिक सम्बन्धमा पनि कुनै असर पर्नेछैन।
सासू-ससुराले हाम्रो ख्याल राख्नु किन स्वाभाविक हो?
म आफ्नो श्रीमान्‌/श्रीमतीको ख्याल राख्दै छु अनि आमाबुबालाई बेवास्ता गरेको पनि छैन भनेर कसरी देखाउन सक्छु?